Sidee looga helaa ikhtiyaarka "fiidiyowyada aan jeclahay" barta YouTube? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 523
Barmaamijka YouTube-ka ayaa lagu daraa a Ikhtiyaar noo ogolaaneysa inaan aragno liis dhammaystiran oo ah dhammaan fiidiyowyada aan "ka helnay". Si aan u helno liiskan, waxaan si fudud u gujineynaa badhanka "Fiidiyowyada aan jeclahay" ee ku yaal liiska ugu muhiimsan.
Laakiin haddii aadan aqoon sida loo helo xulashadan Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso qodobka soosocda halkaas oo aan ku tusi doono talaabo talaabo ah oo ay tahay inaad raacdo si aad u aragto liiska fiidiyowyada aad kahesho koontadaada YouTube.
Talaabooyinka lagu galo ikhtiyaarka "Fiidiyowyada aan jeclahay"
Isticmaalayaasha barxadda YouTube waxay awoodi doonaan inay galaan liiska fiidiyowyada aan aad u jeclahay laga soo qaatay nooca desktop-ka iyo sidoo kale dalabka aaladaha mobilada. Labada xaaladoodba hawshu waa mid fudud oo dhakhso badan.
Habka 1: Laga soo bilaabo nooca desktop-ka
Ma rabtaa inaad ogaato fiidiyowyada aad "ka heshay" YouTube-ka? Waxaad ku sameyn kartaa qaab aad u fudud oo ka yimid nooca desktop-ka ee barnaamijkan fiidiyowga ee qulqulka badan.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah gal marinka YouTube kombiyuutarkayaga. Kaliya waa inaad furtaa biraawsarka oo aad qortaa cinwaanka websaydhka soo socda www.youtube.com
Marka aan ku jirno barxadda waa inaan gasho e-maylkeena iyo lambarka sirta ah. Hadda waxaan ku riixeynaa saddexda xariiq ee jiifka ah ee ka muuqda qeybta bidix ee kore ee shaashadda oo guji ikhtiyaarka "Maktabadda"
Dhamaadka bogga waxaad ka heli doontaa qayb cinwaankeedu yahay "Fiidiyowyada Waan Jecelahay”. Halkaas, liis dhammaystiran ayaa ka muuqan doona dhammaan fiidiyowyada aad "ka heshay" mashiinka dhexdiisa. Si aad u hesho liiska oo dhameystiran kaliya waa inaad gujisaa "See All".
Guji "Fiidiyowyada aan ka helo"
Waxaa jira dariiq aad uga fudud oo toos ah si loo helo liiska fiidiyowyada aan ka jeclahay Youtube-ka. Halkan waxaan kuugu sharxeynaa:
dhagsii kor ku xusan saddexda xariiq ee jiifka ah (geeska bidix ee kore)
Guji xulashada "Fiidiyowyada Waan Jecelahay"
Diyaarso. Waxaad horey uheli laheyd liiska dhamaan fiidiyowyada aad kaheshay madal.
Habka 2: Laga soo bilaabo codsiga moobiilka
Isticmaalayaasha inta badan ka soo gala YouTube-ka barnaamijka mobilada sidoo kale waxay marin ka heli karaan liiska fiidiyowyada ee laga dhex helay barmaamijka. Waa kuwan tallaabooyinka la raacayo:
Marka hore waa inaad fur codsiga Youtube qalabkaaga gacanta. Haddii aanad yeelan fadhiga furan, si fudud u muuji emaylkaaga iyo lambarkaaga sirta ah.
Qaybta midig ee hoose ee shaashadda waxaad ka heli doontaa ikhtiyaar leh magaca “Biblioteca”. Waxaad ubaahan doontaa inaad halkaas gujiso si aad uhesho liiska fiidiyowyadi ugu dambeeyay iyo liisaska liiska.
Hoos waxaad kaheleysaa ikhtiyaarka “Fiidiyowyada Waan Jecelahay”. Taabashada waxay fureysaa bog leh dhammaan fiidiyowyada YouTube ee aad ka heshay.
1 Talaabooyinka lagu galo ikhtiyaarka "Fiidiyowyada aan jeclahay"
2 Habka 1: Laga soo bilaabo nooca desktop-ka
3 Guji "Fiidiyowyada aan ka helo"
4 Habka 2: Laga soo bilaabo codsiga moobiilka